Zvese hunyengeri hweiyo iPhone X kuti unyatsoishandisa | IPhone nhau
Iyo iPhone X yakave shanduko hombe kubvira Apple payakatanga iyo yekutanga modhi inozivikanwa kwazvo pasirese munyika, anopfuura makore gumi apfuura. Haisi chete iyi nyowani isina dhizaini dhizaini, asi Apple yabvisa bhatani repamba, uye izvi kuwedzera kune shanduko yekushanduka zvinoreva kuti mabatiro atinoita mudziyo anochinjawo.
Kuvhara maapplication, kuvhura multitasking, kusvikika, switching pakati maapplication, iyo control Center, iyo ziviso nzvimbo kana kunyange kudzima chishandiso vari mabasa anoitwa zvakasiyana pane iyo iPhone X kupfuura isu atakajaira kubvira pakaonekwa iPhone yekutanga. Mune ino vhidhiyo uye chinyorwa tinokuudza iwe ese shanduko kuti iwe uzive maitiro ekubata iyo iPhone X kubva pazuva rekutanga.
1 Multitask uye chinja maapplication nemaoko
2 Imwe-inobata skrini kumutsa
3 Kudzora nzvimbo, majeti uye chiziviso nzvimbo
4 Nyarara pasi, skrini, Apple Bhadhara uye Siri
Multitask uye chinja maapplication nemaoko
Hapasisina bhatani repamba, hapachisina kutya kunotyisa kwevamwe vashandisi vaishandisa bhatani rakatarisana pachiratidziro kubva pazuva rekutanga kuitira kuti bhatani reiyo iPhone rirege kutyoka. Chekupedzisira, mushure memakore tichitsvaga kunyorera muCydia kuburikidza neabilbreak, tinogona kushandisa yedu iPhone zvachose kuburikidza nemasaini. Kuvhara chikumbiro, kuvhura multitasking uye kushandura pakati pekushandisa kunokurumidza uye nyore nekutenda kune mitezo:
Vhara zvinoshandiswa nekutsvaira kumusoro kubva pasi pechiso
Vhura multitasking nechiratidzo chimwe chete asi wakabatirira pasi kumagumo pakati pechidzitiro
Chinja pakati pekushandisa nekutsvedza pazasi kwechiso, kubva kuruboshwe uchienda kurudyi.
Pane chimwe chiitiko icho Apple chisingatiudze nezvacho, asi icho chinotibvumidza kuvhura multitasking nekukurumidza kupfuura nechiratidzo chepamutemo, uye ndiko kutsvedza kubva kukona yezasi kuruboshwe kuenda kukona yepamusoro yekurudyi, diagonally. Nezve izvi isu tichavhura multitasking padiki ipapo, chiratidzo chekuti kana uchinge wajaira icho chinonyanya kusununguka pane kutsvedza kusvika pakati pechidzitiro uye batisisa kwechipiri.
Nezve shanduko yekushandisa, chiratidzo chekutsvedza uchidzika nemucheto wezasi kwechidzitiro kubva kuruboshwe uchienda kurudyi chinokuendesa kuchikumbiro chawaishandisa kare, uye kana ukadzokorora unoenda kuburikidza nekushandisa kwese zvichiteerana, zvichangobva kuitika. Kana kamwechete muapp ukaita chiratidzo chakapesana, kubva kurudyi kuenda kuruboshwe, unodzokera kune yapfuura, zvichingodaro, kusvika panguva yaunoshandisa chishandiso.. Kana chikumbiro chikatove chakashandiswa chimwe chinhu, chinova chekutanga mune zvakateedzana uye chiratidzo kubva kurudyi kuenda kuruboshwe hachichashande, kudzamara wadzokorora mashandiro.
Imwe-inobata skrini kumutsa
Kwezvizvarwa zvakati wandei, iyo iPhone yakamedza skrini yayo painenge ichiifambisa (kubva pa iPhone 6s zvichienda mberi). Kana iwe uine yako iPhone patafura uye iwe woitora kuti uitarise, haufanire kuita chero chinhu kuti iyo skrini ivhure. Asi ikozvino iyo iPhone X zvakare inobvumidza iwe kumisikidza iyo skrini nekuibata iyo, ine diki pombi pairi.. Uye zvakare, iro bhatani repadivi zvakare rinozovhura pachiratidziro kana tikachimanikidza.
Isu tiri zvakare pane yekuvhara skrini ine maviri matsva mapfupi: kamera uye tochi. Iyo kamera yanga yave nesu kwechinguva uye chiratidzo chekutsvaira kubva kurudyi kuenda kuruboshwe chakavhura zvakananga application kutora mifananidzo kana mavhidhiyo, asi ikozvino isu zvakare tine iyi nyowani sarudzo. Ose mabhatani, ese ari maviri kamera uye tochi, anovhenekerwa ne3D Kuvabata, ndiko kuti, kwete nekuvabata chete asi nekutsimbirira nesimba pachiratidziri. Chaizvoizvo kugadzikana kuti iwo maviri mashandiro anowanikwa kubva kune iyo yekuvharira skrini uye haatombo fanirwa kuburitsa iyo inodzora nzvimbo kuti uvhure iwo.
Kudzora nzvimbo, majeti uye chiziviso nzvimbo
Aya matatu ekare eIOS zvinhu akavewo akachinjwa neiyo nyowani iPhone X. Iyo yekudzora nzvimbo ndiyo inogona kunyanya kuvhiringidza chinhu pakutanga kune avo vanotora iyo iPhone X vasingazive chero chinhu nezve shanduko yayo, nekuti chiratidzo chekuiburitsa icho zvakasiyana zvakasiyana. Kana tisati tashandisa sarudzo yekutsvaira kubva pasi kusvika kumusoro pane chero iOS skrini kuratidza inodzora nzvimbo, ikozvino zvinowanikwa nekutsvaira kubva pamusoro pechiso, kumusoro kwekona kona, pasi.
Uye zvinofanirwa kuitwa kubva kumusoro kurudyi, nekuti kana tikazviita kubva kune chero imwe chikamu chepamusoro skrini, chii chinovhura chichava nzvimbo yekuzivisa, iyo yakafanana nekiyi skrini muIOS 11, kunyangwe iine mapfupi ekuti tochi uye kamera. Nekungotadza nzvimbo yekuzivisa inongoratidza zviziviso zvazvino, kana tichida kuona zvekare tichafanirwa kutsvedza kubva pasi kumusoro kuratidzwa, kana paine. Kuita 3D Kubata pane "x" munzvimbo yekuzivisa kuchatipa sarudzo yekudzima zvese zviziviso kamwechete.
Uye iwo majeti aripi? Zvese zviri pahwindo rekiyi uye pane inotenderera ino chinhu chinoramba chisina kuchinja, ichiri "kuruboshwe". Kubva kudesktop huru, kubva pakiyi skrini kana kubva kunzvimbo yekuzivisa isu tinokwanisa kuvhura iwo majeti echidzitiro kutsvedza kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, uye pachiratidziri ichocho tinokwanisa kugadzirisa, kuwedzera kana kudzima kuti igare sezvatinoda.
Nyarara pasi, skrini, Apple Bhadhara uye Siri
Ziva kuti panguva yese iyi hatina kutaura nezve chero bhatani repanyama, uye ndicho chinhu chikuru cheiyi iPhone X. Asi kuchine bhatani rinoshanda mamwe mabasa, akadai saSiri, Apple Pay, dzima chishandiso kana kutora skrini: bhatani repadivi. Uye mashandiro ayo akachinja zvakanyanya zvekuti ndiyo imwe yezvinonyanya kuvhiringidza pakutanga.
Kubhadhara neApple Pay izvozvi tinofanirwa kuvhura basa racho nenzira yakafanana nemashandisiro arinoita muApple Watch kubva pakutanga: kudzvanya bhatani repadivi kaviri. Tichave tichizivikanwa neFace ID uyezve tinogona kubhadhara panzvimbo yekuverenga kadhi. Tisati tasvika kuiyo iPhone kune iyo Apple Pay terminal, yakavhurwa yakanangana, asi nekuti isu taifanira kuziva nekuziva chigunwe chemunwe paTouch ID. Sezvo ikozvino kuzivikanwa kwechiso kunenge kuri kwechinguva kana tichitarisa iyo iPhone, iOS inotikumbira kuti isu tive avo vanoziva kumisikidza Apple Pay kunzvenga matambudziko.
Siri ichiri kushandiswa nezwi rairo "Hei Siri", chero bedzi tichiigadzirisa panguva yekutanga kugadzirisa kweiyo iOS marongero pane yedu iPhone. Asi isu tinogona zvakare kushandisa bhatani bhatani kuvhura Apple chaiyo mubatsiri: kubata pasi bhatani repadivi. Ichi hachisiri chiratidzo chekudzima chishandiso, asi kubvunza Siri chimwe chinhu.
Uye ini ndinodzima sei iyo terminal? Zvakanaka, nekudzvanya bhatani rezwi (chero chinhu) uye bhatani reparutivi panguva imwe chete. Iyo iOS emergency screen ichavhura nesarudzo yekufona nekukurumidza kana kudzima iyo iPhone. Rangarira kuti kana ichi skrini chikaonekwa Chiso ID chicharemara kusvikira iwe waisa yako yekuvhura kodhi zvakare.
Chekupedzisira, iyo skrini inoshanduka zvakare neiyo iPhone X, uye ikozvino zvinoitwa nekutsikirira padivi bhatani uye vhoriyamu kumusoro bhatani. Sezvo zvakatoitika kubvira pakatangwa iOS 11, tinogona kugadzirisa iyo skrini, chirimwa, kuwedzera zvirevo, nezvimwe. uye wozogovana kwese kwatinoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ese manomano eiyo iPhone X kuti uwane zvakanyanya mairi
Iwe unogona zvakare kuvhura multitasking nekutsvedza kubva kunzvimbo yepazasi nzvimbo pasina kubata mukati kati kwechipiri.
Iri kungotsvedza uye kana iwe wasvika pakati mira uye uburitse. Pakarepo anovhura multitasking.
Musiyano wekuenda mundiro ndewekuti iwe paunoenda kundiro unotsvedza usingamire. Kana ikaona kuti iwe unomira kunyangwe chegumi chechipiri, uye rega, multitasking inovhura.
Icho chokwadi chekumirira wechipiri mukurumbira iwe chaunotaura ndechekuti iyo animation iyo inotora nguva kuoneka kubva kune mamwe ese "mavara" ezvekushandisa kuruboshwe. Asi iwe haufanire kumirira kuti iyo animation ionekwe, edza kubva pakati kumusoro, mira uye ubudise panguva imwe chete.
Ezio Auditore akadaro
Ndingawane kupi iyo yekuvhura Wallpaper?
Pindura kuna Ezio Auditore
Uye apo ini ndisati ndave pachiratidzu 5 che iPhone yako uye waida kudzokera kuchidzitiro chekutanga, kudzvanya bhatani repamba kwaizokutora iwe kuenda kuchiratidziro chekutanga, iine iPhone X izvi hazvipo, handiti?